DAAWO SAWIRRO: Guddoomiyaha cusub ee G/Banaadir ‘Cumar Finish’ oo Cashar adag ka bartay Dilkii Eng. Yariisow (War Xiiso Leh) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Guddoomiyaha cusub ee G/Banaadir ‘Cumar Finish’ oo Cashar adag ka...
Muqdisho (Halqaran.com) – Duqa cusub ee magaalad Muqdisho, ahna gudoomiyaha maamulka Gobolka Banaadir, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa waxaa uu sameystay ilaalo adag, kuwaa oo maanta lagu arkay goobo uu kormeeray oo Aqalka Dowladda Hoose Xamar ka mid yahay.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo Khamiistii maanta Aqalka Dowladda Hoose kula kulmay ilaaladiisa ayaa kulankaasi ka hor waxaa la sheegay in ilaaladiisa ay baaritaan amni xaqiijin ahi ku sameeyen halkaasi.
Arrintan ayaa ah mid ku cusub Maamulka Gobolka Banaadir, kuwii ka horreeyayna la arki jiray iyadoo ay ilaaladoodu qarsoon yihiin.
Duqa Magaalada Muqdisho ayaa kulanka uu la qaatay Kuxigeenadiisa waxaa uu ahaa mid la xiriira sida ay u socoto shaqada Maamulka Gobolka Banaadir, iyadoo uu warbixino ka dhageystay xubnihii uu la kulmay.
Dhanka kale Duqa Muqdisho ayaa maanta kormeeray Xarunta Dad Dhigista ee Dowladda Hoose Xamar, halkaasoo ka mid ah goobaha loogu adeeggo bulshada saddexda malyan gaaraysa, ee ku nool Magaalada Muqdisho. Booqashada uu ku sameeyay Xaruntan ayaa waxaa kaloo ka soo muuqday ilaalada adag, ee uu sameystay.
Guddoomiye Cumar Finish ayaa tallaabada uu ku soo bandhigay ilaaladiisa waxay ku soo aadaysaa, xilli 1dii bishan uu Duqii hore ee Magaalada Muqdisho u geeriyooday dhaawac culus, oo 24-kii bishii July ka soo gaaray qarax ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose.
Cumar Finish ayaa waxaa uu u muuqdaa mid dersi ka bartay, sidii fududeyd ee lagu qaarajiyay C/raxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow), kaasoo aanay jirin cid loo maxkamadeeyay dilkiisa, waxaana uu muujiyay inaanay jirin cid la’aamini karo.
Cumar Finish oo 22-kii bishan xilka loo magacaabay ayaa waxaa uu maalmaha soo socdo uu isu diyaarinaya, sidii uu xilka kula wareegi lahaa, xilli Muqdisho ay ka socoto qaban-qaabada munasabadda xil wareejintiisa.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa saluugsan hannaanka ay maanta u shaqayso dowladda haataan dalka ka jirta, taasoo loo sababeeyo hoggaankii dalka oo noqday mid aan qumanayn.
Si kastaba, dadka dhaliila dowladda ayaa ku dhaliila in hoggaanka dalka wax ka khaldan yihiin, waxayna ku doodayan haddii dowladdu ku socon laheyd tubta toosan aanan la arki lahayn dad saluugsan shaqadeeda.
Cashar ka bartay
Dilkii Eng. Yariisow
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir